By မိုးမိုး 24 April 2019
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး မြင်းခြံ ခရိုင် ငါန်းဇွန် မြို့နယ် အတွင်း အမေရိကန် နိုင်ငံသား ဦးဆောင် စိုက်ပျိုးထားသည့် ဆေးခြောက် စိုက်ခင်းနှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းများကို ဖမ်းဆီး အရေးယူလိုက်ကြောင်း မူးယစ်ဆေး သုံးစွဲမှု ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟို ကော်မတီ (CCDAC Myanmar) က ယနေ့ သတင်း ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ထိုကြောင့် စိုက်ပျိုးသူ အမေရိကန်နိုင်ငံသားများ ဖြစ်ကြသော Mr. John Fredric Todoroki (၆၃) နှစ်နှင့် Mr. Alexander Skemp Todoroki (၄၉)နှစ်(စုံစမ်းဆဲ) တို့ အပြင် စိုက်ခင်း တာဝန်ခံ ရှိန်းလတ် (၃၇)နှစ်၊ မရွှန်းလဲ့မြတ်နိုး (၂၃)နှစ် တို့ကို ဖမ်းဆီးပြီး မူးယစ် ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေး ဝါးများ ဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ အရေး ယူ လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
စိုက်ခင်း ဧက ၂၀ တွင် ဆေးခြောက် အပင်ပေါင်း ၃၄၉,၂၉၀ ခန့်၊ ပျိုးပင် ၅၂၀ဝ ခန့် ရှိပြီး ဆာလာအိတ် ၁၉ အိတ် အတွင်းမှ ဆေးခြောက်အစေ့ (မျိုးစေ့) ၃၈၀ ကီလို၊ ဖန်ပုလင်း အတွင်းမှ ဆေးခြောက်အဆီ ၁,၈၀၄ ဂရမ်၊ Formic Acid ၁ လီတာ၊ အက်သနော အရည် ၄၅. ၆ လီတာ၊ အယ်လ်ကိုဟော အရည် ၂၂. ၈ လီတာ၊ Bio Maxs အစိမ်းရောင် အရည် ၆ လီတာ၊ Acetone အရည် ၅ လီတာ၊ Acetonitrile အရည် ၅ လီတာ၊ Concort Water ၃ လီတာ၊ Methonal အရည် ၁၂.၅ လီတာ၊ အမိုနီယမ်ဖော့စဖိတ် ၅၀ဝ ဂရမ်ပါ မော်တော်ယာဉ် ၂ စီး၊ ဆေးခြောက် ၂၇၀.၅ ကီလိုနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့ကြောင်းလည်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။
ငါန်းဇွန်မြို့နယ်က တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ၁ မှ ဦးကျော်စိုးနိုင်က“မူးယစ် အထူး အဖွဲ့က ကြပ်မတ်ပြီး ဆောင် ရွက် နေပါတယ်။ ဥပဒေ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနဲ့ ညီအောင် လုပ်ဖို့ရာ အားလုံး အာရုံစိုက်ပြီး ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် လုပ်နေပါ တယ်”ဟု ဧရာဝတီ သို့ ပြောသည်။
လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာတွင် ဆေးခြောက် စိုက်ခင်းဟု နာမည် ကြီးနေသည့် မြို့သာ စက်မှုဇုန် အတွင်း စိုက်ပျိုး ထား သည့် စိုက်ခင်း ဧက ၃၀ ကျော်သည် ၁ နှစ်နီးပါး ရှိပြီး ကင်ဆာ ရောဂါ ပျောက်ဆေး ထုတ်လုပ်ရန် ရည်ရွည်၍ စိုက်ပျိုး ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက် ဧပြီ ၂၂ ရက်က မန္တလေးတိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့၊ FDA၊ မြင်းခြံခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှင့် ဓာတုဗေဒ စစ်ဆေးရေး ဌာနခွဲ (မန္တလေး) တို့က သွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ စိုက်ခင်းသို့ သွားရောက် စစ်ဆေးသည့် အဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး အစားအသောက် နှင့် ဆေးဝါး ကွပ်ကဲမှု ဦးစီးဌာန(FDA) မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာ နီနီအေး က စိုက်ခင်း စိုက်ပျိုးထားတာ တနှစ်နီးပါး ရှိပြီ ဖြစ်ကာ စိုက်ခင်း ပိုင်ရှင်သည် နိုင်ငံခြားသား ဖြစ်ပြီး သွားရောက် စစ်ဆေးသည့် အချိန်၌ မတွေ့ရှိခဲ့ရ သဖြင့် မည်သည့် ရည်ရွယ် ချက်နှင့် စိုက်ပျိုးခြင်းကို မန်နေဂျာ ဖြစ်သူအား မေးမြန်းရာ ပိုင်ရှင် ညွှန်ကြားချက် အတိုင်း စိုက်ပျိုး ရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြောင်း ရှင်းပြသည်။
၎င်းက ဆက်လက်၍“စိုက်နေတဲ့ အလုပ်သမားတွေ ကတော့ ကင်ဆာ အတွက် စမ်းသပ်ဖို့ လုပ်နေတယ်လို့ ပြော တယ်။ အဲဒီ လိုမျိုး လုပ်မယ်ဆိုရင်တောင် ခွင့်ပြုချက်တော့ ယူရမှာပေါ့လေ။ သူတို့ဟာ သူတို့ စိုက်ပြီး သူတို့ဟာ သူတို့ လုပ်နေတယ် ဆိုတော့ ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ် လုပ်နေသလို ဖြစ်တာပေါ့”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
အဆိုပါ အပင်အရွက်မှ အဆီ ထုတ်လုပ်နေပြီး စမ်းသပ်မှု ပြုလုပ်နေသည့် စက်ပစ္စည်း ကိရိယာများ တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း၊ လတ်တလောတွင် မူးယစ် အဖွဲ့ကသာ စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း ဒေါက်တာ နီနီအေးက ဆက်လက် ရှင်း ပြ သည်။
စိုက်ခင်း တာဝန်ခံ ရှိုင်းလတ် နှင့် မရွှန်းလဲ့မြတ်နိုး တို့အား မေးမြန်းရာတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလခန့် က စိုက်ခင်း ဧက ၆၀ ခန့်အား အမေရိကန် နိုင်ငံသား John Fredric ၊ Thomas နှင့် Alexandra Skemp တို့ ၃ ဦးက သဘာဝ ဆေးဘက် ဝင် လျှော်ပင် စိုက်ပျိုးရန် အတွက် Mandalay Myotha Industrial Development Public Co,Ltd (MMID) ထံမှ ငှားရမ်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး FDA မှ တိုင်း ဦးစီးဌာနမှူး ဖြစ်သူ ဒု ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာ ထွန်းလင်းအောင် ကလည်း ထိန်းချုပ် ဆေးဝါးများတွင် အသုံးပြုသည့် အိပ်ဆေးများ၊ အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးများတွင်သာ ဘိန်းနှင့် ဘိန်းထွက် ပစ္စည်း များမှ ထုတ်ယူပြီး မော်ဖင်းဆေး အဖြစ် ထုတ်ခြင်းမျိုးသာ ရှိကြောင်း ပြောသည်။
၎င်းက“ကင်ဆာကို ပျောက်ကင်းအောင် ဆေးထုတ်တာတော့ မရှိပါဘူး။ မော်ဖင်းကတော့ ဘိန်းကနေ လုပ်ထားတာ ဖြစ် တယ်။ ဆေးခြောက်ကနေ ကင်ဆာရောဂါ အတွက် ထုတ်လုပ်နိုင်တယ် ဆိုတာတော့ မရှိပါဘူး”ဟုလည်း ပြောဆို သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ဆေးခြောက် စိုက်ပျိုးခွင့်ကို တရား ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားခြင်း မရှိကြောင်း၊ ဆေးခြောက်မှာ မူးယစ် ဆေးဝါး အမျိုးအစားတွင် ပါဝင်ကြောင်း၊ ယခု ဖြစ်စဉ်သည် ဆေးခြောက်ရွက် မှန်ကန်ပါက ထုတ်လုပ်မှုထဲတွင် ပါဝင် ကြောင်း၊ ဘိန်း စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် တူညီကြောင်း ပျဉ်းမနားမြို့ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ဇော် က ပြောသည်။
ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ဇော်က“အမေရိကန်၊ ဥပရောပ၊ ပြင်သစ် တို့မှာ ဆေးခြောက်က အကန့်အသတ်နဲ့ လက်ခံပါတယ်။ မြန်မာ ပြည်မှာ အဲဒီလို မရှိပါဘူး။ ဆေးခြောက် အာနိသင် ရှိခဲ့ရင် ဥပဒေ လမ်းကြောင်း အတိုင်း သွားမှာပါ။ စိုက်ပျိုး ခြင်း၊ ထုတ်လုပ် ခြင်း အတိုင်း သွားမှာဖြစ်ပြီး ဘိန်းအတိုင်း ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်လို့ ရပါတယ်”ဟုလည်း ပြောပြသည်။
အဆိုပါ စက်မှုဇုန်၌ ချဉ်ပေါင်လျှော် နွယ်ဝင် ဆေးခြောက် အာနိသင် ပါရှိသည်ဟု ယူဆရသော စိုက်ခင်း ဧက ၆၀ ခန့်၊ အလျား ပေ ၁၂၀၊ အနံ ပေ ၂၀ ရှိ အခန်း ၃ ခန်းပါ ဂိုထောင် ၁ လုံး၊ အဆိုပါ ဂိုထောင်အတွင်းမှ အရွက်မှုန့် အိတ် ၅၅ အိတ် ခန့်နှင့် အစေး ကုန်ချော ၁ ကီလိုခန့်အား စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ဧပြီ ၂၂ ရက်က ပြည်ထဲရေးက ထုတ်ပြန် ကြေညာ ထားသည်။
စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက် အရ ချဉ်ပေါင် လျှော်နွယ်ဝင် ဆေးခြောက် အာနိသင် ပါရှိသည်ဟု ယူဆရသော အရွက်ခြောက် မှုန့် ၅ ကီလိုခန့် နှင့် အရက် (ဘီအီး) ၅ ဂါလန်တို့ ရောစပ်၍ အဝတ်လျှော်စက်ထဲ ထည့်မွှေပြီး ပေါင်းခံပါက တဆေး ပုံသဏ္ဌာန် အစေး ၂၅၀ ဂရမ်ခန့် ရရှိကြောင်း၊ အစေ့အား ကြိတ်၍ ရရှိသော အဆီကို ပေါင်းခံ၍လည်း ထုတ်လုပ်နိုင် ကြောင်း၊ ကင်ဆာ ပျောက်ဆေး ထုတ်လုပ်ရန် ရည်ရွယ်၍ စိုက်ပျိုးခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရကြောင်း ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီး ဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။
ထို့ပြင် အဆိုပါ အရွက်/အစေ့/ကုန်ချော အစေးနှင့် အဆီ အနည်းငယ်စီအား ဓာတုဗေဒစစ်ဆေးရေး ဌာနခွဲ (မန္တလေး) သို့ နမူနာ ယူဆောင်သွားကြောင်းနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီးနှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ John Fredric အား စစ်ဆေး မေးမြန်း လျက် ရှိကြောင်းလည်း ပြည်ထဲရေးက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
Topics: ဆေးခြောက် စိုက်ခင်း